E yigharịrị nzukọ nzukọ nlegharị anya nke Mekong rue Febụwarị 2021
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » E yigharịrị nzukọ nzukọ nlegharị anya nke Mekong rue Febụwarị 2021
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • Akwụkwọ akụkọ Myanmar • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
The Onglọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nlegharị Anya nke Mekong (MTCO) ekwuputala na Satọdee, Mee 30th n’oge webinar nke Tourlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Njegharị Njem Ntugharị nke Myanmar kwuru na Ministri nke Hotels na njem nlegharị anya nke Myanmar kpebiri ịkwaga ụbọchị Mekong Tourism Forum kwa ụbọchị na February 15-16, 2021 site na August 25-26, 2020, n'etiti nke ugbu a Covid-19 ọgbaghara. Echiche a gbadoro ụkwụ na mgbochi njem nke ugbu a, na ọ dịkarịrị ala na ndị bịara ọgbakọ ga-enwe ntụsara ahụ n’ebe mgbakọ a na-emechi emechi karịa mmadụ 300.
Myanmar ga-aga n'ihu na-akwado nzukọ a na Bagan nnabata iji kwalite ọnọdụ ya dị ka saịtị UNESCO World Heritage a họpụtara aha na July 2019. Isiokwu a ka ga-abụ "A nweta njem nlegharị anya nke ọma", na-elekwasị anya na iwughachi njem nleta na Greater Mekong Ngalaba
Onye isi oche MTCO, Jens Thraenhart kwuru, sị: “Isiokwu 'chie nweta njem nleta kwesịrị ekwesị' dị mkpa karịa mgbe ọ bụla, n'ihi na anyị nwere nnukwu ohere iji weghachite njem nlegharị anya ma nwekwuo ike site na ịnakwere ụdị ọhụụ dịka 'Donut Economics', yana itinye ego mpaghara imekọ ihe ọnụ site na ịmepụta egosipụta njem iji mee ka mgbake njem nlegharị anya.
"Ọ bụ ezie na ọ dịghị onye nwere ike ịkọ ma ọ bụrụ na njem ga-ekwe omume na February ma ndị mmadụ ga-enwe ahụ iru ala na ịnọnyere ọgbakọ na ọtụtụ narị ndị nnọchiteanya, anyị na-edozi ụbọchị ọhụụ, ma nwee olile anya kachasị mma.", Jens Thraenhart gara n'ihu. “Anyị ga-arụsi ọrụ ike na Mịnịstrị nke Hotels na njem nlegharị anya nke Myanmar, ụlọ ọrụ ndị otu nzuzo nke ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Myanmar na ndị otu ụlọ ahịa njem njem dị iche iche, yana ndị ọkachamara MICE mpaghara na mba ụwa iji hụ na ihe omume dị nchebe na ịdị ọcha kwesịrị ekwesị. ọ̀tụ̀tụ̀ n'ọnọdụ ya. ”
Bagan bụ ebe dị mkpa na akara ngosi na Mpaghara Nnukwu Mekong, n'ihi ya, anyị kpebiri inwe ọkwa mbụ nke Covid-19 Mekong Tourism Forum iji nọrọ na UNESCO World Heritage town. Nzukọ ndị njem Mekong na-eme kwa afọ site na ndị otu GMS nọ na ya site na atụmatụ ntụgharị, nke ga-aga n'ihu otu afọ n'ụzọ kwekọrọ na ya. Ka o siri dị, Vietnam Nam ga-abụ onye ọbịa nke Mekong Tourism Forum na 2022.
Onye ọnụ na-ekwuchitere Minista nke Họtel na njem nlegharị anya nke Myanmar kwuru, sị: “Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịnabata nzukọ mbụ nke Mekong Tourism Forum nke ọrịa Covid-19 gbasoro. Nke a ga-abụ ihe omume njem nlegharị anya dị mkpa ọ bụghị naanị maka Myanmar, mana maka Mpaghara Oke Mekong dum, yana ASEAN, n'ihi na ihe omume ahụ ga-esetịpụ usoro na mmekorita maka iwughachi njem nleta na mpaghara ahụ n'ụzọ kachasị adigide. Ebe UNESCO World Heritage nke Bagan, nke di na Mandalay Region nke Myanmar, bidoro na narị afọ nke iteghete, pagodas ya agabigala oge mgbanwe. Enweghị ike ịnwe ebe zuru oke karị iji kọwaa ọdịnihu nke njem na mpaghara mpaghara Greater Mekong. "
Officelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Njem Nlegharị Anya nke Mekong na-eme atụmatụ maka ụbọchị ọkara nke Virtual Mekong Tourism site na mkparịta ụka vidiyo n'ehihie nke Tuesday, August 25th, na-elekwasị anya na nkwụghachi na mgbake nke njem na Greater Mekong Subregion.
Officelọ ọrụ na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Mekong, site na usoro mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze na-aga ebe Mekong, etinyela atụmatụ dị iche iche iji rụkọta ọrụ na ndị njem na mpaghara n'oge oge ndị a siri ike, gụnyere ntọala nke Mekong Advisory Group (MeTAG), Corona Virus Nweta webpages iji gwa ụlọ ọrụ banyere mgbochi na atumatu njem, usoro nkwado maka obere azụmaahịa ya so na mkpokọta Ahụmahụ Mekong, yana mmekorita ya na ụlọ ọrụ Mekong iji dozie echiche na ọrụ ọhụụ na-azaghachi ọrịa COVID-19. Mekong Innovative Startups in Tourism (MIST) mmemme mepere oge nhọpụta ya maka 2020 na-elekwasị anya na nnabata. Mpaghara ndị ọzọ na-aga n'ihu, dịka mkpọsa mgbasa ozi ọha na eze na-eme njem mgbasa ozi #MekongMemories iji mepụta igwe ojii ọdịnaya nke ahụmịhe gara aga iji kpalie ndị mmadụ na #TravelTomorrow, na ihe ọhụrụ Mekong Deals iji gosipụta akwụkwọ ikike anaghị akwụghachi ndị ọrụ njem na-enyere aka lanarị nsogbu a n'oge nsogbu a. A na-atụ anya usoro ịzụ ahịa njem njem ga-ejikọ azụmahịa dị na Mekong karịa ndị na-azụ ahịa 50,000 B2B n'ahịa ndị China na Q4 nke 2020 na mmekorita ya na ndị na-eduga teknụzụ njem na ụlọ ahịa ahịa ahịa Drain Trail Interactive.
Ndị nledo nabatara ugbu a na UNWTO General Assembly na Madrid November 29, 2021
Ndị nnọchi anya UNWTO na-aga Mgbakọ General November 30-December 2, ekwesịghị ịtụ anya ịhụ akara eTN na-acha anụnụ anụnụ na ọcha na ndị nta akụkọ eTN na-enyefe kaadị azụmaahịa, n'ihi na a machibidoro akwụkwọ a iwu ịga.
Kedu mgbe ịmalitegharị ụgbọ elu na South Africa? Mkparịta ụka ọhụrụ n'elu njem nlegharị anya ka malitere November 29, 2021
Mịnịsta ala UK bụ Boris Johnson gwara onye isi ala South Africa Cyril Ramaphosa okwu n'ehihie a. Ha tụlere ihe ịma aka dị n'ụwa niile sitere na ụdị COVID-19 ọhụrụ, yana ụzọ ha ga-esi rụọ ọrụ ọnụ iji merie ya na imepe njem mba ụwa.
Akụkọ Barometer njem nlegharị anya ụwa ọhụrụ sitere na ụwa ọzọ? November 28, 2021
Mịnịsta ahụike Canada nkwupụta ngwa ngwa gbasara mgbasa nke COVID Variant Omicron ọhụrụ November 28, 2021
Onye minista ahụike nke Canada Honorable Jean-Yves Duclos mere ọkwa dị mkpa na mgbasa nke COVID Omicron ọhụrụ dị na Canada.
Mmanya: Chenin Blanc ịdọ aka ná ntị: Site Yummy ruo Yucky November 28, 2021
Chenin Blanc bụ mkpụrụ vaịn na-eleghara anya. Gịnị kpatara? N'ihi na ọ na-esiri ike karịa Chardonnay ma ọ bụ Sauvignon Blanc itolite na ime mmanya. Mkpụrụ vaịn na-achọ ngwakọta nke ala na ihu igwe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke zuru oke, ọ bụkwa ihe ịma aka nye onye na-ese mmanya iji dozie osisi oak na nhọrọ ndị ọzọ na-eme ka ụtọ.
Ihe anyị maara gbasara COVID-19 Omicron: Onye isi ala kọwara November 28, 2021
Ala ọmajiji 7.5 na Northern Peru November 28, 2021
Ala ọmajiji abụọ dakwasịrị Peru na Sọnde a, mana ọ dabara nke ọma emeghị nnukwu mmerụ ahụ ma ọ bụ mmerụ ahụ. Mmebi ndị e dekọrọ na mpaghara Amazon dịpụrụ adịpụ na-abụkarị ihe arụrụ arụ.
Stephen Asiimwe ga-eduga ngalaba njem nlegharị anya nkeonwe Uganda November 28, 2021
Board of Directors of the Uganda Private Sector Foundation na-ekwupụta nhọpụta nke Mr. Stephen Asiimwe, dịka onye isi nchịkwa ọhụrụ ya. Ọ nọchiri Mazị Gideon Badagawa nwụrụ anwụ n'ọnwa Juun afọ a.